Esteri 5 | IBhayibheli Elikuyi-Internet | INguqulo Yezwe Elisha
5 Kwathi ngosuku lwesithathu+ u-Esteri wagqoka ngendlela yasebukhosini,+ okwathi ngemva kwalokho wama egcekeni elingaphakathi+ lendlu yenkosi malungana nendlu yenkosi, ngesikhathi inkosi ihlezi esihlalweni sayo sobukhosi endlini yobukhosi malungana nomnyango wendlu. 2 Futhi kwathi nje lapho inkosi ibona u-Esteri indlovukazi emi egcekeni, wathola umusa+ emehlweni ayo, kangangokuba inkosi yelulela ku-Esteri intonga yayo yegolide+ eyayisesandleni sayo. U-Esteri wayesesondela wathinta isihloko sentonga. 3 Khona-ke inkosi yathi kuye: “O Esteri ndlovukazi, ukhala ngani, futhi siyini isicelo sakho?+ Ngisho noma kungaba yingxenye yobukhosi+—mawusinikwe nokusinikwa!” 4 U-Esteri yena wathi: “Uma kubonakala kukuhle enkosini, inkosi mayize noHamani+ namuhla edilini+ engiyilungiselele lona.” 5 Ngalokho inkosi yathi: “Celani uHamani ukuba enze ngokushesha+ ngokwezwi lika-Esteri.” Kamuva inkosi noHamani beza edilini elalenziwe u-Esteri. 6 Ngemva kwesikhathi inkosi yathi ku-Esteri phakathi nedili lewayini: “Ukhala ngani?+ Mawukunikwe nokukunikwa! Futhi siyini isicelo sakho? Ngisho noma kungaba yingxenye yobukhosi—masenziwe nokwenziwa!” 7 U-Esteri waphendula wathi: “Engikhala ngakho nesicelo sami kuwukuthi, 8 Uma ngitholé umusa emehlweni enkosi+ futhi uma kubonakala kukuhle enkosini ukunginika engikhala ngako nokwenza ngokwesicelo sami, inkosi noHamani mabeze edilini engizobenzela lona kusasa, khona-ke kusasa ngizokwenza ngokwezwi lenkosi.”+ 9 Ngenxa yalokho uHamani waphuma ngalolo suku ejabula+ futhi eneme enhliziyweni; kodwa ngokushesha lapho uHamani ebona uMoridekayi esangweni lenkosi+ nokuthi akasukumi+ futhi akathuthumeli ngenxa yakhe,+ masinyane uHamani wagcwala intukuthelo+ ngoMoridekayi. 10 Nokho, uHamani wazithiba futhi wafika endlini yakhe. Khona-ke wathumela ukuba kungeniswe abangane bakhe noZereshi+ umkakhe; 11 UHamani wayesememezela kubo inkazimulo yengcebo yakhe+ nesibalo esikhulu samadodana akhe+ nakho konke lokho inkosi eyayimenze waba mkhulu ngakho nokuthi yayimphakamise kanjani ngaphezu kwezikhulu nezinceku zenkosi.+ 12 UHamani waqhubeka wathi: “Ngaphezu kwalokho, u-Esteri indlovukazi akangenisanga muntu kanye nenkosi edilini abelenzile ngaphandle kwami kuphela,+ nakusasa+ futhi ngimenywé kwakhe kanye nenkosi. 13 Kodwa konke lokhu—akukho nokukodwa kwakho okunganelisayo uma nje ngisabona uMoridekayi umJuda ehlezi esangweni lenkosi.” 14 UZereshi umkakhe nabo bonke abangane bakhe bathi kuye: “Makwenziwe isigxobo+ esiyizingalo ezingamashumi amahlanu ukuphakama. Khona-ke ekuseni+ usho enkosini ukuthi makulengiswe uMoridekayi kuso.+ Khona-ke ungene kanye nenkosi edilini ujabula.” Ngakho le nto yabonakala iyinhle+ phambi kukaHamani, wayeseyaleza ukuba kwenziwe isigxobo.+